”Waxaan maqlnay 7 xabbadood!” – Wasiir uu aabihii MW ahaan jirey oo xafiiskiisa lagu dhex toogtey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan maqlnay 7 xabbadood!” – Wasiir uu aabihii MW ahaan jirey oo...
”Waxaan maqlnay 7 xabbadood!” – Wasiir uu aabihii MW ahaan jirey oo xafiiskiisa lagu dhex toogtey
(Hadalsame) 07 Juun 2022 – Wasiirkii Degaanka ee Jamhuuriyadda Dominica, Orlando Jorge Mera, ayaa lagu toogtey oo uu xafiiskiisa ku dhex diley Miguel Cruz, oo ay saaxiibo dhow ahaayeen tan iyo yaraantiisii, sida uu sheegay Xafiiska Madaxwaynaha dalkan jasiiradda ah ee dhaca bartamaha Ameerika, Luis Abinader.
Shaqaalaha wasaaradda ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen ugu yaraan 7 xabbadood oo ka dhacay xafiiska gudihiisa. Booliska ayaa diidey in gudaha loo galo dhismahaasi oo ay sidoo kale ku dhex taallo Wasaaradda Dalxiiska. Cruz ayaa la sheegay in lagu xiray kaniisad meesha u dhow. Ilaa hadda se lama shaacin sababta ka dambeysay dilka ninkaasi.
Abinader ayaa tacsi u diray qoyska Jorge oo u marsiiyey boggiisa Twitter-ka, isagoo soo qoray: “Aad ayaan uga qoomameynayaa geerida saaxiibkaygii iigu fiicnaa, iyo wasiirkeennii, Orlando Jorge Mera.”
Waxaa la yaab leh in qoyska Wasiirka dhintay ay soo saareen bayaan u qoran sidatan: “Qoyskeennu wuu cafiyey qofkii sidan ku sameeyey. Mid ka mid ah dhaxalkii Orlando waa inaan cuqdad cidna loo qaadin.”
Waxaa soo tacsiyeeyey saraakiil badan oo dowladeed sida MW hore ee Leonel Fernandez, oo ninka dhintay ku tilmaamay “qof insaan ah iyo adeege bulsho.” MW Xigeenka Raquel Pena, walaasha xaaska Jorge, ayaa iyaduna ku sheegtay “ma daale iyo insaan sharfoonaa.”
Jorge wuxuu ahaa xubin ka tirsan qoys siyaasadeed oo xooggan oo jasiiradda ku nool. Waxa uu ahaa xubin aasaasi ah oo ka tirsanaa Xisbiga Kacaanka Casriga ah. Isagoo qarreen ah, ayaa waxaa loo magacaabay wasaaraddan bishii Agoosto 2020-kii.
Aabihii, Salvador Jorge Blanco, wuxuu ahaa Madaxwaynihii hore ee Jamhuuriyadda jasiiradda ah ee Dominica laga bilaabo 1982 ilaa 1986-kii, halka walaashii, Dilia Leticia, ay tahay Wasiir Xigeenka Maamulka Abiinader. Wiilka Jorge ayaa sidoo kale xubin ka ah Xisbiga Kacaanka Casriga ah (Modern Revolutionary Party).
Xaaska Wasiirka la diley, ee Patricia Selma Villegas Garcia, waa Danjiraha Jamhuuriyadda Dominica ee Brazil.
Weli lama faahfaahinin waxa dhexmaray labada nin ee uu mid wax diley.
Previous article”Ma samayn kartaan mid kale!” – Dal jawaab deg deg ah loogu gooddiyey haddii uu sameeyo tijaabo nukliyeer ah
Next articleRuushka oo ”kashifay” arrin ay Ukraine kula kacday ciidamadeeda isku daya inay dib u gurtaan + Sawirro